Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafampana Aostralianina » Club Wyndham Flynns Beach Resort dia avo roa heny amin'ny habeny
Vaovao Mafampana Aostralianina • Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Resorts
Ny Club Wyndham Flynns Beach dia vonona hitondra mpivezivezy bebe kokoa amin'ny faritra Port Macquarie. Port Macquarie dia tanàna amoron-tsiraka ao amin'ny faritry ny governemanta eo an-toerana ao Port Macquarie-Hastings. Any amin'ny morontsiraka avaratra avaratr'i New South Wales, Australia, no misy azy, manodidina ny 390 km avaratry Sydney, ary 570 km atsimon'ny Brisbane, Aostralia.
Ny fivoaran'ny Club Wyndham Flynns Beach dia nanampy villa 53 iray ka hatramin'ny efitrano fatoriana efatra, miaraka amin'ny 20 voatondro ho Deluxe, 25 ho Grand ary valo ho filoham-pirenena. Ny villa filoham-pirenena misy efitrano efatra, manokana, dia natao ho vokatra tsy manam-paharoa ao amin'ny faritra, misy efitrano fatoriana efatra, efitra fandroana efatra, lakozia feno, toerana fanasan-damba, tokotanin'ny gorodona manokana misy spaoro ivelany, ary lavarangana lehibe ambony , ary fittings ambony sy famaranana.
Nandritra ny roa taona lasa izay, ny fampandrosoana $ 25 tapitrisa dia nanome asa ho an'ny mpivarotra sy ny matihanina 220 ary nanitatra ny toeram-pialantsasatra tamina trano sy villa 113. Ny tetikasa dia nahitana ihany koa ny famoronana kafe vaovao, faritra lalao, pisinin'ankizy, trano heva iraisana sy ny fijanonan'ny fiara, ary koa ny gym fanatanjahan-tena sy fandraisana olona nohavaozina.
"Talohan'ity fivoarana ity sy ny valan'aretina COVID-19, ny toeram-pialan-tsasatra dia nankafy ambaratonga mihoatra ny 90 isan-jato eo ho eo ary nanome $ 20 tapitrisa isan-taona ho an'ny toekarena eo an-toerana mivantana na tsia amin'ny alàlan'ny fandaniana ataon'ny vahiny - isa izay antenainay ankehitriny mitombo, "hoy i Barry Robinson, filoha sady talen'ny fitantanana, International Operations of Wyndham Destinations.
“Raha ampiana ity trano itoerana premium ity, mamorona toeram-pialan-tsasatra vaovao sy manatsara ny efa misy, dia mino izahay fa hisarika fangatahana bebe kokoa ho an'ny toeram-pialan-tsasatray ary, amin'izany, hampiroborobo ny hakanton'ny Port Macquarie, izay hanome vahana ny post-COVID ao amin'ny faritra -19 fanarenana. "
Natomboka ny volana mey 2019 ny tetikasa saingy nanapa-kevitra ny mpandrindra, Wyndham Destinations Asia Pacific, fa hiroso amin'ny asa mandritra ny areti-mandringana COVID-19 miaraka amin'ny fanantenana fa hiaina fanarenana tanteraka ilay faritra.
"Ity fivoarana mitentina 25 tapitrisa dolara mahery ity dia mampiseho ny fahatokisan'ny Wyndham Destinations any Port Macquarie Hastings ho toerana fizahan-tany lehibe any New South Wales," hoy ny ben'ny tanàna Peta Pinson.
“Nanome tosika ara-toekarena ity tetikasa ity izay nankasitrahan'ny mpiara-monina anay bebe kokoa, asa bebe kokoa eo an-toerana ary fanintonana vaovao ho an'ireo mpitsidika anay. Fanampiny lehibe ho an'ny faritra misy antsika izany, miaraka amin'ireo tetik'asa marobe an-tapitrisany dolara hitan'ny faritra misy antsika amin'izao fotoana izao. ”
Club Wyndham Flynns Beach dia miorina eo amin'ny morontsiraka avaratra avaratr'i New South Wales, sidina adiny iray fotsiny na fiara adiny efatra miala an'i Sydney. Manolotra karazana kojakoja isan-karazany, fandraisana andraikitra ho an'ny ankohonana ary fanofana maimaimpoana isan-karazany amin'ny fitaovana ivelany sy lalao.
Club Wyndham South Pacific dia tantanan'ny Wyndham Destinations Asia Pacific, ampahany